Mustaqbalka Badda Shiinaha: Sababtoo ah labada saameyn ee taageerada kharashka iyo filashada xaddidaadda wax soo saarka, qiimaha biraha July ayaa la filayaa inuu si tartiib tartiib ah u xoojiyo - Shiinaha Foshan Hermes Steel
Mustaqbalka Badweynta Shiinaha: Sababtoo ah labada saameyn ee taageerada kharashka iyo filashada xaddidaadda wax soo saarka, qiimaha biraha July ayaa la filayaa inuu si tartiib tartiib ah u xoojiyo
Bartamihii-illaa-dabayaaqadii Maajo, iyada oo ay saameyn ku leeyihiin siyaasadaha degdegga ah, qiimaha birta gudaha ayaa si aad ah hoos ugu dhacay, taas oo dib uga noqotay kororkii labada bilood ee hore ee nus billaha ah. Tan iyo markaas, siyaasadaha xaddidaadda wax soo saarka iyo siyaasadaha xakamaynta ayaa sidoo kale ku dhaqmay suuqa birta, qiimaha birtuna wuxuu isu beddelay naxdin bil-dheer ah.
Sidee qiimaha birtu u socon doonaa bisha Luulyo? Baaraha Donghai Futures Liu Huifeng ayaa aaminsan in wixii ka dambeeya bisha Luulyo, qiimaha biraha uu si tartiib tartiib ah u sii xoogeysan doono iyada oo loo eegayo saameynta laba-geesoodka ah ee taageerada kharashka iyo xayiraadaha wax soo saarka.
Luulyo weli waxay ku jirtaa xilligii caadiga ahaa ee xilligii suuqa birta, welwelka laga qabo daciifinta dalabka iyo kordhinta alaabooyinka ayaa had iyo jeer ahaa mowduucyo aysan suuqa birtu ka fogaan karin xilligan. Si kastaba ha noqotee, Liu Huifeng wuxuu tilmaamay in baahida loo qabo birta ay daciiftay marxaladaha muddada-gaaban, laakiin adkaanta ayaa wali jirta.
Sida ku xusan falanqeyntiisa gaarka ah, bilihii la soo dhaafay, la wareegida dhul dhamaadka iyo xogta dhismaha cusub ee maalgashiga dhismaha ayaa muujisay astaamo daciifnimo sii socota. Isla mar ahaantaana, iyada oo ay saameyn ku yeelaneyso adkeynta guud ee lacagaha iyo bixinta xuduudaha dhulka, xogta iibsiga guryaha Waxaa sidoo kale jiray gaabis joogto ah. Iyada oo ay saameyn ku leeyihiin arrimahan, aagga cusub ee la bilaabay wuxuu leeyahay ixtimaal sare oo koritaan taban. Si kastaba ha noqotee, "qaabka isbeddelka sare, iyo qaabkan moodeellada ah, shirkadaha guryaha dhista waxay ururiyeen qadar ballaadhan oo ah dhismaha dhismaha saamiyada, sidaa darteed maalgashiga dhismaha ee sannadka badhkiis sannadka ayaa wali leh heer adkeysi gaar ah. Liu Huifeng ayaa aaminsan.
Isla mar ahaantaana, marka laga hadlayo kaabayaasha dhaqaalaha, Liu Huifeng wuxuu aaminsan yahay in ka dib markii uu soo galay qeybtii labaad ee sanadka, xawaaraha deynta meeleynta gaarka ah ayaa la dedejin karaa. Haddii aad tixgeliso taageerada mashaariicda saamiyada tan iyo qeybtii labaad ee sanadkii hore, waxaa la filayaa in maalgelinta kaabayaasha dhaqaale ay wali soo qaadaneyso qeybta labaad ee sanadka, waxayna hareerayn kartaa qaar ka mid ah saameynta hoos u dhaca ku yimid maalgashiga guryaha. .
Dhinaca sahayda, iyada oo la raacayo saameynta isku dhafan ee qasaaraha mashiinnada birta iyo xaddidaadaha wax soo saarka ee la xiriira siyaasadda, bixinta biraha ee bisha Luulyo waxay ka dhici kartaa bishii hore. Marka loo eego xisaabinta Liu Huifeng iyo kuwa kale, faa'iidada nidaamka muddada dheer waa -300 yuan / tan, welina waxaa jira faa'iido yar oo loogu talagalay gariiradda kulul. Faa’iidada hadda jirta waa 66.64 yuan / tan. Saamaynta kororka qiimaha duugga ah, birta foornada korontada ayaa sidoo kale bilowday inay lumiso lacag xisaabinta korantada fidsan. Heerka macaashka hadda waa -44.32 yuan / tan. "Saameynta laba-laabka ah ee khasaarihii ugu badnaa ee xilli-xilliyeedkii dalabka, mashiinnada birta ayaa sidoo kale kordhin doona wax-soo-saarkooda iskaa wax u qabso iyo dayactirka." Wuxuu yiri, iyadoo lala socdo siyaasada yareynta wax soo saarka birta ceyriin, siyaasaddu waxay kusii socon doontaa asalka "dhexdhexaadnimada kaarboon". Labada cadaadis ee wax soo saarka suuqa u janjeedha ayaa la filayaa inay keenaan in biraha ay hoos u dhacaan bisha Luulyo ee bishii hore.
Falanqaynta dhamaystiran, Donghai Futures waxay aaminsan tahay in wixii ka dambeeya Julaay, qiimaha biraha uu si tartiib tartiib ah u sii xoogeysan doono iyada oo loo eegayo saameynta laba-geesoodka ah ee taageerada kharashka iyo xayiraadaha wax soo saarka. Dhinaca kale, marka laga hadlayo macdanta birta, mugga maraakiibtu waa deggan yahay oo awoodda wax soo saar ee cusub ayaa la gelinayaa wax soo saar. Qeybta labaad ee sanadka, keenista macdanta birta ayaa si tartiib tartiib ah u soo qaadi doonta. Dhinaca dalabka ayaa wajihi kara labada cadaadis ee xayiraadaha wax soo saar maamul iyo suuq ku saleysan. Hoosta asalka tartiib-tartiib-darrada aasaasiga ah, Is-beddelka siyaasadda xakamaynta wax-soo-saarka gudaha ayaa fure u noqon doonta isbeddelka qiimaha ee macdanta birta.
Waqtiga boostada: Jul-07-2021